भू–माफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गा फिर्ता गराई पाउँ. पोखरेल -
भू–माफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गा फिर्ता गराई पाउँ. पोखरेल
ओली खवर खेलकुद बन तथा बाताबरण राजनीति समाचार
January 7, 2020 January 8, 2020 latestnewsLeaveaComment on भू–माफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गा फिर्ता गराई पाउँ. पोखरेल
डोमालाल रगँशालाको माफियाको आफनो नाममा दर्ता गरेको जमिन फिर्ता गर्न विर्तामोडका गणेश पोखरेलले माग गरेका छन ।
नेपाल पत्रकार महाँसघ झापाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेल, विर्तामोडका स्थानियबासी तथा रेडियो भिजनका सञ्चालक समेत हुन ।
लामो समय देखि माफियाको नाममा रहेको रगँशालामा झापा ११ तथा झापा फुटबल क्लवको राष्टिय तथा अन्तराष्टिय स्तरको फुलवल प्रतियोगिता आयोजना हुदै आएको छ।
नेपालकै प्रसिद्दी कमाएको डोमालाल रगँशालामा हाल सम्म अस्थायी पिरामिड बनाउदै खेल हुदै आएको छ।। प्रेश विज्ञप्ति सहित।।।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग
विषय ः अनारमनी दुर्गा मन्दिरको नाममा रहेको र भू–माफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गा फिर्ता गराई पाउँ ।
प्रस्तुत विषयमा यो जग्गाका सन्दर्भमा मैले जानेका र थाहा पाएका विवरण तल लेखेको लेखमा उल्लेख गरेको छु । थप जानकारीका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो विषयमा मैले झण्डै उक दशकदेखि स्थानीय सञ्चार माध्यममा समाचार र विचार लेखिरहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।
नीतिले कोही खराव हुँदैन, नियतले खराव हुने हो । मन्दिरलाई डोमालाल राजवंशीले जग्गा दान दिए । अहिले उनका नाति रिक्सा चालक छन् । उनका हजुरबाले दान दिएको जग्गाको मोही किन्ने नेपाल सरकारका सह–सचिव र कानुन व्यवसायी छन् । कस्तो विडम्वना । यो जग्गा राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता गराई पाउँ भनी दिवेदन गरेको छु ।
मिति ः २०७६।०९।२२
अब क्यान्सरको उपचार झापामै
निर्वाचनमा मत दायाँबायाँ गर्नेको पद धरापमा
July 27, 2020 July 27, 2020 latestnews
ज्ञानेन्द्र शाहलाई मुख्य अतिथिमा बोलाउने तयारी
November 2, 2018 latestnews
कुनामा बसेर ओथारो बस्दैमा सरकार ढल्न सक्दैन प्रधानमन्त्री ओली
October 18, 2018 latestnews